आफैं उडेको सपना देखे के हुन्छ ? जान्नुहोस | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आफैं उडेको सपना देखे के हुन्छ ? जान्नुहोस
आफैं उडेको सपना देखे के हुन्छ ? जान्नुहोस
बैशाख १३ गते, २०७६ - १२:३१
काठमाडौं । सपना कहिलेंकाही आफ्नै विगत अनि आफैंले भोगीरहेको घटनाको पूर्वानुमान जस्तो देखिन्छ । अनि कहिले काँही त एकदमै अनौठो प्रकृतिको पनि हुन्छ । कतिपयले आफैं मरेको सपना पनि देख्नछ । अनि कतिपयले अलिक असामान्य गरि सपनामा उडेको, नयाँ नौलो ठाउँमा गएको, नयाँ मान्छेसँग भेट भएको पनि देख्छन् ।
आफुँले चाहेको देख्न नसकिने अनि देखेको पनि सबै पुरा नहुने हुँदा सपना बारे धेरै रोचकता मानिएको छ । वैज्ञानिकहरुको पनि ठ्याक्कै सपना के हो र यसको प्रतिफल यहि हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । तथापी सपनाको विषय एउटा खोजको रुपमा रहेको छ ।
फरक–फरक सपना अनुसार त्यसको जीवनमा पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ ? केहि सोधकर्ताले केहि सपनाको बारेमा तथ्यहरु भेटाएका छन् । ती रोचक तथ्य जानकारी लागि राखिएको छ ।
आफै उडेको देखे – समस्या समाधान हुनु
लडाई भएको देखे – प्रसन्नता प्राप्त
सलाई कोर्नु – धन प्राप्ति हुनु
लाश देखे – रोगवाट मुक्ति
नदीको पानी पिएको देखे – सरकारवाट लाभ
कपास देखे – रोग निको हुने
सुन्दरी महिला देखे – प्रेममा सफलता
बैशाख १३ गते, २०७६ - १२:३१ मा प्रकाशित